Kooxda Real Madrid oo dhigeeda Arsenal kula soo biirtay tartanka khadka dhexe ee RB Salzburg - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kooxda Real Madrid oo dhigeeda Arsenal kula soo biirtay tartanka khadka dhexe...
Kooxda Real Madrid oo dhigeeda Arsenal kula soo biirtay tartanka khadka dhexe ee RB Salzburg
Kooxda Real Madrid ayaa dhigeeda Arsenal kula soo biirtay tartanka khadka dhexe ee RB Salzburg ee Dominik Szoboszlai xilli ay kooxda ree London doonaysay inay ku xaliso dhibka ugu weyn ee hadda haysta oo ah la’aanta hal abuur khadka dhexe ah.
Xiddiga ree Hungry ayaa noqday mid kamida ciyaaryahanada loogu doonista badan yahay Yurub kaddib bandhigyo wanaagsan oo uu Salzburg kula soo sameeyay tartanka Champions League.
Sida uu sheegayo wargeyska Diario AS, Real Madrid ayaa kamida kooxaha doonaya saxeexa Szoboszlai balse ciyaaryahanka ayaa la sheegayaa inuu yahay mid is-dejinaya oo si degen go’aan uga gaadhi doona mustaqbalkiisa wax deg-deg ahina uusan ku jirin.
Si lamid ah Arsenal iyo Real Madrid, Dominik Szoboszlai ayaa lala xidhiidhinayay RB Leipzig oo ay xidhiidh dhaw leeyihiin RB Salzburg iyo waliba kooxda ree Talyaani ee AC Milan.
Heshiiska uu 20 sano jirkan kula joogo kooxda ree Austria ayaa ah mid dhacaya gudaha sanadka 2022 iyadoo qandaraaskiisa ugu yaraan 20 Milyan oo euro lagu jabin karo balse la filayo inay kooxdiisu 25 ilaa 30 Milyan oo Pound dalban doonto.
Previous articleWasiirka Difaaca iyo Danjiraha Itoobiya oo kulan yeeshay
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo ka hadlay shaqaaqadii ka dhacday Garoonka Hargeysa